Bu'aa qabeessummaa pirojektii dargaggootaatiif xiyyeeffannaan haa kennamu
Bu'aa qabeessummaa pirojektii dargaggootaatiif xiyyeeffannaan haa kennamu Featured
Biyyi keenya imaammataafi tarsiimoo misoomaa baafattee hojiirra oolchuun guddina walitti fufaa mul'isuu edda eegaltee ooltee bulteetti. Guddina kana keessatti hawaasni biyyattii kamuu shoora olaanaa bahataa yoo tureyyuu, qoodni dargaggootaa isa guddaadha.
Dargaggoonni humna jijjiirama argamsiisuuf barbaadamu hatattamaan fiduu danda'aniidha. Humni kun bu'aa barbaadamu argamsiisuuf haalaan ogganamuu qaba. Carraaleen
hojiis mijaa'uufii qabu.
Mootummaanis kanuma hubatee rakkoo maallaqaa dargaggoota mudatu salphisee dargaggoonni humna guutuudhaan misooma keessatti akka hirmaataniif qarshii biliyoona 10 ramadee hojiirra oolmaasaarratti haala mijeessaa jira.
Haala kana keessaa tokko kan ta'e labsii hundeessa fandii marmaartuu dargaggootaa baasuudha. Labsicha baasuun kan barbaachiseefis maniin misooma biyya keenyaa fiixaan ba'uu kan danda'u, hirmaannaa kallattii dargaggootaatiin waan ta'eef misoomaafi guddina dinagdee ittifufiinsa qabu galmeessisuuf qooda fudhannaasaanii haalaan gabbisuufi fandii dhimma kanaaf oolu sirriitti hojiirra oolchuun milkaa'ina kaayyoo kanaatiif murteessaa waan ta'eefi.
Kanaafuu labsiin hundeessa fandii marmaartuu dargaggootaa Kibxata darbe Mana Marii Bakka Buu'ota Ummataatiin raga'eera. Labsiin ragga'e kun ittigaafatamummaa olaanaa baankotaafi abbootii taayitaa sadarkaa dhimma fandichaa murteessuurratti argamaniif kenne. Kunis kan ta'eef fandii olaanaan kun jalqabarraa eegalee haala saayinsaawaafi heeraafi seera qabeessa ta'een hojii faayidaa misooma dargaggootaatiif akka ooluufi.
Dhugumayyuu maallaqni kun maalirra ooluuf akka ba'u, pirojektiin misoomaa inni irra oolu, bu'aaqabeessa ta'uunsaa, haalli maallaqichi deebi'ee itti sassaabamu xiyyeeffannaadhaan ittiyaadamee kan hojjetamu yoo hintaane, maallaqni guddaan kun biyyaafis ta'e dargaggootaaf faayidaa barbaachisu utuu argamsiisiin tasumatti qisaasamuu mala.
Akka muuxannoorraa hubannutti waldaaleen maayikroofi xixiqqaa tokko tokko ergama guddina cimsu jechuunis imala gara guddina industiriitti godhamu keessatti shoora isaanii ba'achuu kan dadhabaa turaniifi hojiin hordoffiifi gargaarsaa akkasumas to'annoo ga'aan taasifamuufii dhabuusaati.
Kanaafuu fandii dargaggootaa kana akkuma labsicharratti ibsametti qaamoleen ittigaafatamni kennameef marti sadarkaa sadarkaadhaan dhimmi misooma dargaggootaa dhimma guddinaafi saffisa hawaas-dinagdee biyyaa ta'uu hubatanii haalaan hordofuu qabu.
Hordoffii qofa utuu hintaane waa'ee pirojektii misoomaa waldaalee dargaggootaatiin dhihaataniirratti gargaarsaafi deggarsa ogummaa dabaluun bu'aa qabeessummaasaa caalaatti mirkaneessuun barbaachisaa ta'a.
Abbaa dhimmaa kan ta'an dargaggoonnis maallaqni ramadameef kun kallattii misoomaa isaaniif saaquufiif gargaarsa taasifamuuf kanatti fayyadamuun dheebuu misoomaasaanii baasuuf ta'uu hubatanii qorannoo pirojektii misoomaasaanii bu'aa qabeessa gochuuf xiyyeeffannoodhaan bocanii dhiyeeffachuu qabu.
Walumaagalatti qaamoleen labsii fandii dargaggootaa kana keessatti ittigaafatamummaan kennameefis ta'e, fayyadamtoota fandichaa kan ta'an dargaggoonni biyya keenyaa pirojektii misoomaa bu'aa qabeessummaansaa haalaan hubatame dhiheessuun fandicha misooma biyyaatiif akka oolu gochuu qabu.
Torban kana/This_Week 17692
Guyyaa mara/All_Days 1442472